HS:-Heesaha sanadkaan loo qaaday magaalada Belet Weyn
Posted by admin on May 17 2012 22:32:51
HS:-Heesaha sanadkaan loo qaaday magaalada Belet Weyne oo ay hada ka socotomashruuc lagu soo nooleynayo bilicdii iyo quraxdii ay laheyd magaalada. Deeqo Bilan iyo Qoomaal Yare 2012 Daawasho wacan+ Faalo
HS:-Heesaha sanadkaan loo qaaday magaalada Belet Weyne oo ay hada ka socotomashruuc lagu soo nooleynayo bilicdii iyo quraxdii ay laheyd magaalada. Deeqo Bilan iyo Qoomaal Yare 2012 Daawasho wacan
Magalaada Belet Weyne waa magaalo taariikh soo jireen ah ku leh bulshada Soomaaliyeed marka loo eego dalka intiisa kale. waa magaalada lagu rajoweyn yahay iney noqon doonto magaalo Soomaaliweyn kulmisa oo lagu qanban doono gogol nabadeed oo ay Soomalida maanta isku cafiyaan sida qorshuhu yahay mustaqbalka.
Magaalada waxaa ku nool amaba horey ugu noolaa beerlulayaasha Soomaaliya, inkasta oo ay Soomaalidu tahay dadmidab furan oo waxbadan ka duwan umadaha aduunka ilaahne ugu deeqay dal, diin, luqad, qurux hadane mar laga hadlayo Hiiraan iyo shacabkeedu caadi maahan xaalada.
Hadaba dhageysi wanaagsan Deeqa Bilan iyo Qoomaal Yare waxaa xaqiiqa ah marak waqti munaasib ah la helo in labadan dhalinyaro iyo fanaaniintii hore ee Soomaaliya sida Hasan Aden Samatar lagu casuumi doono Hiiraan siiiba magaalda Belet Weyne sidii horeyba loogu casuumay abaankii alifay heesta ilaa maant aaan dhicin ee Belet Weyne.
Abwaan Hadraawi oo marar badan wareysiyo kala duwan lala yeeshey waxuu qiray in dadka reer Belet Weyne yahiin dad xadaarad iyo ilbaxno iskugu tagtay Beerlula ka sheegeynteeduna waaba arin kale oo aan halkaan lagu soo koobi karin.
Insha Warka Hiiraan State